Voasambotra tamin’ny fomba ofisialy noho ny resaka fitsikilovana tany Shina ilay mpanao gazety Shinoa-Aostraliana Cheng Lei · Global Voices teny Malagasy
Mihamafy ny fifanenjanana eo amin'i Aostralia sy i Shina
Voadika ny 08 Marsa 2021 16:41 GMT
Voasambotra tamin'ny fomba ofisialy ilay mpanao gazety Aostraliana sady mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Cheng Lei, voarohirohy ho namoaka tsiambaratelo na nikasa ny hamoaka tsy ara-dalàna ny tsiambaratelom-panjakana na ny fitsikilovana any ivelany, hoy ny manampahefana Shinoa.
Notànana tamin'ny volana Aogositra 2020 i Cheng, mpanolotra fandaharana momba ny raharaham-pihariana ao amin'ny fahitalavi-panjakana China Global Television Network (CGTN). Voatondro molotra tamin'ny fampiasana ilay antsoina fatratra hoe “diplaomasian'ny takalon'aina” ny governemanta Shinoa tamin ‘izany fotoana.
Niatrika fahasarotana maro ny mpanao gazety miasa any Shina ho an'ny fampitam-baovao vahiny tato ho ato. Ilay mpanao gazety Aostraliana Bill Birtles, mpitati-baovao isaka ny amin'ny 7.30 amin'ity tantara ity no mpampita vaovaon'ny ABC Beijing talohan'ny nivoahany haingana ny firenena tamin'ny volana Septambra 2020. Nanazava ny sasantsasany tamin'ny zava-nitranga izy nandritra ny fandaharana 7.30:
Midadasika kokoa ny sehatra ifanenjanana misy eo amin'i Aostralia sy i Shina mikasika ny varotra, ny filaminana ary ny diplomasia.
Nandà ny filazan'i Shina fa miezaka mitsabaka amin'ny rafi-pitsaran'izy ireo ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Aostraliana Marise Payne. Namaly i Payne fa “mendrika ny fenitra fototra ho an'ny fitsarana, ny dingana ara-dalàna ary ny fomba itondrana ny olombelona mba hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena” i Cheng Lei.
Tranga malaza iray hafa ihany koa ny fanagadrana hatrany hatramin'ny volana Janoary 2019 ataon'ny manampahefana Shinoa an'ilay mpanoratra sady mpaneho hevitra an-tserasera malaza, Yang Hengjun, Shinoa-Aostraliana. Niteraka hatezerana sy fahasosorana an-tserasera tany Aostralia ny vaovao farany momba an'i Cheng Lei. Nahitana ny fanehoan-kevitra betsaka “Avy any Aostralia” manohitra ny Antoko Komonista Shinoa ny siokan'i Laoch:
Ilay mpanao gazety Aostraliana Peter Greste, izay nandany 440 andro tany an-tranomaizina tany Egypta, dia nanohy ny fanohanany an'i Cheng Lei. Hoy izy tao anaty fanambarana ho an'ny Fikambanana ho an'ny Fahalalahan'ny Mpanao Gazety:
Vaovao maro no navoaka tao amin'ny Reddit, izay nisy fifanakalozan-kevitra mafana.
Nilaza olana iray izay nifanarahan'ny maro hafa i Defamedprawn:
Mandritra izany fotoana izany, voalaza fa mihatsaravelatsihy i Aostralia noho ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitsarana. Nanambara ny olana mampiady hevitra momba ny fitsarana tsiambaratelo any an-toerana i Ann: